Laba siyaabood oo aad ku heli farshaxanka album on Lugood
Siyaabo si aad u hesho Album farshaxanka on Lugood
La'yahay farshaxanka waa hortooda aad u diiqayo u perfectionists aniga oo kale ah oo doonaya maktabadda music ay tahay in la si fiican u abaabulan waqtiyada oo dhan. Waxaa runtii waa hortooda daran markii nus ka mid ah kuwan raadkaygay aad la la'yahay ay farshaxanimada kala. Waxay kaliya ma ahan aad maktabadda eegi rata xun, laakiin sidoo kale unorganized oo murugsan.
Waxaa jira habab dib u soo ceshano farshaxanimada ka Lugood maqan; habka si toos ah iyo habka buuga.
1. Automatic Habka ee Ujrooryinka maqan Album farshaxanka.
2. The Habka of Gacanta Ujrooryinka, farshaxanka oo maqan.
3. Habka ugu fudud ee aad u helayso maqan Album farshaxanka
Gudaha gal si aad Lugood Store isticmaalaya ID Apple aad. Haddii aad hore u saxiixay, Lugood si fudud u furan.
Dooro dhammaan files audio by haysta muftaaxa Shift aqalka, inta aad riix file kasta oo shaqsi ahaan ama iyada oo la isticmaalayo Ctrl + A.
Hadda xaq u riix, oo ka menu dropdown dooro "Get Album farshaxanka".
Dib u fadhiiso oo nasato, Lugood toos ah u bilaabi doonaa raadinta iyo qashin qubka la maqan farshaxanka album.
Marka nidaamka wax kaqabashada automatic dhamaato, waxaad heli doontaa ogeysiis ah in aad ka warrami waxaa ka mid ah. Haddii bartey qaar ka mid ah farshaxanka lama baxey (oo waxaa jira fursad aad u weyn u dhici doonaa), waxaad doonaa sida ogeysiiyo.
2. Habka of Gacanta Ujrooryinka, farshaxanka oo maqan.
Raadi arts on Google ee kala albums / tareenka.
Save images ee goobta la doonayo of your computer / laptop.
Open Lugood, dooro song ee aad doonayso in aad ku darto farshaxanka, xaq guji ku yaal oo ka menu dropdown ku doortaan, "Get Info".
Screen A cusub u furi doonaa, u tag tab ah ku tilmaamay "farshaxanka" oo guji "Add". Browse in ay helaan image jecel oo guji "Open". Riix "Ok" in lagu daro farshaxanka si ay file aad dooratay.
Hadda idinku waxaad laga yaabaa inuu dareemo in labada hab, kuwaas oo ay leeyihiin qaar ka mid ah qasaarooyin dhab ah sida:
1. Kaqabashada waxay si toos ah kiisaska intooda badan, ku guuldareysto inuu soo ceshano oo dhan ee farshaxanka ee la waayay.
2. In wax kaqabashada buuggan, waa inaad fiirisaa mid kasta oo ka mid ah ka maqan naftaada farshaxanka, badbaadin si aad u computer / laptop ka dibna raac habka a eheeyn ee u ku daray in ay si gaar ah u jeclaystay files audio.
TunesGo waa tababare fudud oo xiiso leh Lugood oggolaanaysa in aad maamulato dhammaan xogta Lugood aad dhammaan aaladaha aad (iPads, iPhone iwm) oo aan haysan in ay dhex maraan Lugood waqti kasta. Waxaa intaa dheer, waxa ay ka caawisaa abaabulka maktabadda Lugood aad iyadoo lagu eegayo u maqan farshaxanka album, tags, songs nuqul ka maqan iyo kuwan raadkaygay iwm maqan oo wuxuu diyaariyaa si toos ah in click ee button hal. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in ay dib u kor xogta aad, maareeyo xiriirrada iyo sawiro ka mid qalab tufaax wareejiyo kale. Waxaa la socon kara Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, MAC OS X, macruufka 9 iyo sidoo kale telefoonada Android iyo Windows.
Windows Version i
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda TunesGo, furto Lugood leh TunesGo hore u furay oo ka menu slider hoose ee suuqa kala xulan "Nadaafadda Lugood Library".
TunesGo bilaabi doonaa baar maktabadda wixii macluumaad ah ee maqan iyo bandhigaan stats ah. Dooro "Clean Up".
Haddii aad version maxkamadda, Gurtida Go ma awoodi doonaan in ay dib u soo ceshano maqan farshaxanka album oo halkan ku weydiin doonaa inaad iibsato version Premium ka. Haddii si kastaba ha ahaatee, aad isticmaalayso version joogtada ah ee caymiska, suuqa kala socda raaci doonaan:
Hadda waxa aannu is barbardhigi kartaa saddexda geedi socodka wada hadleen kor ku xusan sida wax kaqabashada ee farshaxanka si toos ah la isticmaalayo Lugood, wax kaqabashada buuggan farshaxanka isticmaalaya Lugood iyo wax kaqabashada farshaxanka isticmaalaya Lugood iyo waxaa iska cad in Blatter uu yahay oo keliya ma aha fudud laakiin sidoo kale waqti yar wax gubaya. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ka hor tago oo heli version premium in hadda in aad soo arkay sida ay faa'iido pro TunesGo yahay!
> Resource > Lugood > Siyaabaha si aad u hesho farshaxanka album on Lugood